Borderless A3 + Size Epson L1800 Photo Ink Tank Printer
Ny L1800 no rafitra tanky ranomainty A3 + 6-loko voalohany manerantany mpanonta, manome anao ny fahaizana hamokatra tsy manam-petra, kalitaon'ny sary pirinty amin'ny vidiny ambany dia ambany. Raha ny fizarana avo no resahina sary misy fiantraikany amin'ny ambaratonga lehibe kokoa, ny L1800 no vahaolana efa azonao efa niandry.
. Vokatra hatramin'ny 1 500 sary 4R
. Manonta haingana hatramin'ny 15ppm
. Tavoahangy ranomainty misy vokatra be
. Fiantohana 1 taona na pirinty 9.000
Mpanonta printy vaovao 6 an'ny CISS vaovao
Tsy misy ranomainty orignial ao anatiny
Safidy tsara amin'ny fanontana sublimation
Vidiny ambany, mpanonta avo lenta A3 Size Epson L1300 Photo Ink Tank Printer
Ny Epson L1300 no mpanonta printy rafitra an-tany voalohany misy loko 4, A3 + tany am-boalohany, mitondra fahaizana be dia be amin'ny fanontana tahirin-kevitra A3 avo lenta amin'ny fomba lehibe.
Tavoahangy ranomainty misy vokatra be
Manonta haingana hatramin'ny 15ipm
Fanontana printy hatramin'ny 5760 x 1440 dpi
Warranty an'ny pejy 2 taona na 30.000, izay voalohany
5-25% SN manga / volomparasy volomparasy Nitrate Elect marker, Indelible Ink Marker Pen, Voting Ink Pen amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny Parliament / President Election
Ny ranomainty tsy azo foanana, izay azo ampiarahina amin'ny borosy, penina, famafazana na atsoboka ao anaty tavoahangy ny rantsantanan'ireo mpifidy, dia misy nitrate volafotsy. Ny fahaizany mandoto ny rantsan-tànana mandritra ny fotoana maharitra - mazàna maherin'ny 12 ora - dia miankina betsaka amin'ny fatran'ny nitrate volafotsy, ny fomba ampiharana azy ary mandra-pahoviana no mijanona amin'ny hoditra sy ny rantsantanana alohan'ny hamafana ny ranomainty be loatra. Ny atin'ny nitrate volafotsy dia mety 5%, 7%, 10%, 14%, 15%, 20%, 25%.
Ny penina tsy azo esorina dia napetraka amin'ny rantsan-tànan'ny mpifidy (mazàna) mandritra ny fifidianana mba hisorohana ny hosoka amin'ny fifidianana toy ny fifidianana indroa Izy io dia fomba mahomby ho an'ny firenena izay tsy anaovana fenitra an-tsoratra na fananganana andrim-panjakana foana ny antontan-taratasy famantarana ny olom-pirenena.
5-25% Volom-borona Nitrate Volafotsy / Loko volomparasy volomparasy mangatsiaka, Ranomainty tsy azo esorina, Ink mifidy amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny Parlemanta / Fifidianana filoham-pirenena
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana ranomainty, stamp pad, stamp isika, indrindra ny famokarana fifidianana, toy ny ink tsy azo kosehina, UV ink, pad misy ny rantsantanana ary afaka manome vokatra hafa amin'ny fifidianana isika, Tao anatin'izay taona lasa izay, fanandramana manan-karena amin'ny vokatra fifidianana , manondrana ny ranomainty. ho an'i Filipina, Oganda, Irak, Egypt, Iraq, Sudan, Nigeria, Congo, Mali, ary Burkina Faso, Kenya, Tanzania, Afghanistan, Nigeria, Congo, Malawi…
7ML / tavoahangy vita amin'ny volamena vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny volamena ho an'ny loharano fanoratana sary hosodoko Graffiti Non Carbon
12 Pcs x Dip Pen Ink (tsy tafiditra ao ny pen).
18ml Voninkazo mamirapiratra miloko kaligrafy fanoratana hosodoko tavoahangy penina
Loko 24 samihafa, izay azo ampiasaina amin'ny fanoratana, hosodoko, fanamarihana, graffiti.
Safidy mety amin'ny fampiasana sekoly na birao izany.
Miaraka amin'ny vovoka mangirana amin'ny ranomainty, mahatonga ny soratra na ny sary hosodoko ho tsara kokoa.